Page2– Lokpati.com
पक्राउ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड सरकार अपराध राशिफल नेकपा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवन अमेरिका नेपाली काँग्रेस मृत्यु प्रचण्ड नेपाल प्रहरी
कोरोनाले नयाँ विश्व व्यवस्थाकाे ढाेका खाेल्न सक्छ : प्रचण्ड (भिडियो)
काठमाडौं, १ जेठ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक चुनौतीभित्रै सम्भावना हुने भएकाले कोरोना महामारीपछि विश्व व्यवस्थामा फेरबदल आउनसक्ने बताएका छन्। बिहीबार नेकपानिकट एकीकृत…
प्रचण्ड : समाजवादी क्रान्तिका नायक
नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी समूह छैन। अन्तरसंघर्ष मूलतः समाजवादी क्रान्ति कि दलाल नोकरशाही पूँजीवादको संस्थागत विकास ? यसै विषयमा केन्द्रित छ। यो अन्तरसंघर्षमा समाजवादी क्रान्तिप्रति निष्ठा राख्ने, पार्टीलाई कम्युनिष्ट सिद्धान्त र…
असल शिक्षकका १० गुण के-के हु्न् ?
काठमाडौं। यस्तो मान्छे जसले शिक्षण कार्य गर्ने गर्छ। सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियालाई सहजता साथै विशेषज्ञताका साथ गर्छ। २१ औं शताब्दीमा शिक्षामा अनेकन परिवर्तन र सुधारहरु आएका छन्। तर, मानवीय सम्पर्क तथा दुईतर्फी सम्वादको भूमिका समयको साथ अझै…
जनयुद्धमा शहिद हुने १० केन्द्रीय नेताहरु
काठमाडौं। वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गते मंगलबार अर्थात् १३ फेब्रुअरी १९९६ मा तात्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सामन्ती सत्ताको अन्त्य र जनवादी सत्ताको स्थापना गर्ने भन्दै जनयुद्धको घोषणा गर्‍यो। १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धमा करीब १७ हजार…
विरोधीले ढाल्न सक्दैनन्, हाम्रै खराबीले हामी नढलौं : प्रचण्ड (भिडियो)
काठमाडौं, १ फागुन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल गणतन्त्र, संघीयता, नयाँ संविधान र नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन सम्भव भएको बताएका छन्। उनले नेपालको क्रान्ति विश्वका अरु क्रान्तिभन्दा भिन्न भएको बताए।…
जनसेनाका सात डिभिजन : को–को थिए कमाण्डर ?
काठमाडौं। माओवादीले २०५२ सालबाट सुरु गरेको जनयुद्ध नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक मानिन्छ। यही जनयुद्धको जग र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कायम भएको छ। जनताका प्रतिनिधिहरुले समाजवादउन्मूख…
दोहोरो सदस्यता त्याग्न सहकारी विभागको जरुरी सूचना
काठमाडाैं। दोहोरो सदस्यता लिएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरुलाई सहकारी विभागको सूचना काठमाडौं। सहकारी विभागले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारीमा क्रियाशील हुन नपाउने ऐनको प्रावधान स्मरण गराउँदै त्यस्तो सदस्यता त्याग्ने व्यवस्था गर्न सहकारीहरुका…